Posted in အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged burmese horoscope, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာဘုတ်, မြန်မာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	# လောကဓံ ကြောင့် အရောင်ပြောင်းခြင်းPublished September 11, 2011 | By Dr.Tin Bo Bo	.
ဗေဒင်အကြောင်း မရေးဘဲ ဟိုလျှောက်ရေး ဒီလျှောက်ရေး လို့တော့ မယူဆစေချင်ဘူး။ ကနေ့ စာအုပ်တစ်အုပ် ဖတ်မိရင်း ဟိုတွေးဒီတွေး တွေးမိရာက ကောက်ရေး မိလိုက်တာပါ။
ပုတ်သင်ညိုတွေမှာ အရောင်ပြောင်းတတ်ကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လောကဓံလှိုင်းနဲ့ တွေ့လာတဲ့ လူသားတွေ မှာလည်း ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ၊ သဘောထား ခံယူချက်တွေ ပြောင်းလဲ တတ်ကြပါတယ်။ နောက်ပြီး ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း ကိုယ့်အရောင်နဲ့အတူ အလိုက်အထိုက် ပြောင်းလဲသွားတတ်ကြပါတယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး တွေးမိပြီး ရေးမိတာပါ။
ဗေဒင်ဆိုင်ရာတွေကတော့ ဒီလို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ရေးလို့ မရဘူးလေ။ အချိန် သိပ်ယူရလို့ အခုရက်ပိုင်းမှာတော့ ရေးဖြစ်ဖို့ အချိန်ကြာဦးမှာပါ။
ဒီလ (စက်တင်ဘာလ) အတွက် (၇)ရက်သားသမီးဟောကိန်းများ နဲ့ သင်္ချာဗေဒဟောကိန်းများကိုတော့ တင်မပေးနိုင်တော့မယ် မထင်ပါဘူး။ နောက်လ, မှာတော့ ဆက်ဆက်တင်ပေးပါမယ်။
Posted in ဘ၀ ဒဿန | Tagged ကျရှုံးချိန်, နိမ့်မြင့် တက်ကျ, အရောင်ပြောင်းခြင်း, လောကဓံ တရား, အောင်မြင်ချိန်	# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများPublished August 8, 2011 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in သင်္ချာဗေဒ | Tagged Numerology Birth Date, Your Numbers, ဂဏန်းဗေဒင်, သင်္ချာဗေဒ, သင့် မွေးဂဏန်း သင်္ချာ, သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ	# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လ ဟောကိန်းများPublished August 5, 2011 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in မဟာဘုတ်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged (၇)ရက် သားသမီးများအတွက် ဟောကိန်းများ, (၇)ရက် ဗေဒင်, ingaweikzar, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar zodiac, မြန်မာ့ ရိုးရာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်	# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်းPublished June 30, 2011 | By Dr.Tin Bo Bo	ကိုယ့်မှာ ပြဿနာ တစ်ခုခု ရှိလာပြီဆိုရင် ဗေဒင်ဆရာနဲ့ ပြဿနာကို အဖြေရှာချင်ကြသူများအတွက် အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်းလေး တစ်ခုကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဗေဒင်မေးချင်ပြီဆိုရင်လည်း ဗေဒင်ဆရာ ရှာရတဲ့ ဒုက္ခကလည်း မသေးလှဘူးဗျ။ ကိုယ်မေးချင်တဲ့ ကိစ္စကို ဟောနိုင်တဲ့ဆရာကို ရှာရတယ်။ဟောတာ မှန်/မမှန်ကို လည်း စုံစမ်းရသေးတယ်။ နောက်ပြီး ခြောက်လုံးလှန့်လုံးတွေပေး မျှော်လင့်ချက်တွေပေးပြီး “ယတြာ” နဲ့ လုပ်စားနေတဲ့ ဆရာလိမ် ၊ ဆရာတုတွေနဲ့ တွေ့မှာလည်း ကြောက်ရသေး သဗျ။
ဟောပြောခ ကတော့ “သဒ္ဓါကြေး” လေးပါ။ ယတြာခကတော့ “သောင်းဂဏန်း ၊ သိန်းဂဏန်း” နဲ့ လုပ်စား နေကြတဲ့ ဆရာတု ၊ ဆရာလိမ်တွေကလည်း တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ ပေါမှ ပေါဘဲ။ ဒီတော့ မှန်မှန်ကန်ကန် နဲ့ အသက်မွေးနေကြတဲ့ ဗေဒင်ဆရာတွေ အတွက် ဗေဒင်ပညာနဲ့ အသက်မွေးရတာကိုက မျက်နှာပူစရာ ၊ ရှက်စရာလို ဖြစ်လာပြီ ပေါ့ဗျာ။ ဒီတော့ ပြဿနာ ရှိလာလို့ ဗေဒင်မေးချင်လာရင် ဘယ်ဗေဒင်ဆရာဆီမှ မသွားဘဲ ကိုယ့်အိမ်မှာတင် “ကိုယ်ဘဲ ဗေဒင်မေးသူ ကိုယ်ဘဲ ဗေဒင်ဆရာ” လုပ်ရရင် မကောင်းဘူးလား။
“ဆရာရယ် ကျွန်တော်/ကျွန်မ က ဗေဒင်မှ မတတ်ဘဲ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဆရာပြန် လုပ်လို့ ရမှာလဲ” လို့ မေးချင်သေးလား။ ဒီတော့ ရှင်းပြရမှာပေါ့။ တကယ်တော့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အနာဂါတ်ဘဲဖြစ်ဖြစ် ၊ မိသားစုတစ်ခုရဲ့ အနာဂါတ်ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် အရာအားလုံးရဲ့ အနာဂါတ်ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ကြိုတင် သတ်မှတ်ပြီးသားဘဲဗျ။ ဒီလို အနာဂါတ်မှာ ဖြစ်လာမယ့် ဖြစ်ရပ်တွေရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ “ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့” ရှိနေပြီးသားပါ။ ဒါကို ဖော်ထုတ်လိုက်ရုံပါဘဲ။
Posted in ဂမ္ဘီရ | Tagged MaHaBote, Myanmar Astrology, ကိုယ်တိုင်မေး ဗေဒင်, စာချခြင်း, တရုတ်ရိုးရာ ဗေဒင်, ယိချင်း ဗေဒင်, အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်, ဗေဒင် အလွယ်မေးနည်း	# (၇)ရက် သားသမီးများအတွက် ဇွန်လ ဟောကိန်းများPublished June 1, 2011 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in မဟာဘုတ်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged (၇)ရက် သားသမီးများအတွက် ဟောကိန်းများ, (၇)ရက် ဗေဒင်, ingaweikzar, mahabote, Myanmar Astrology, myanmar zodiac, မြန်မာ့ ရိုးရာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင် | 18 Comments	# တော်ဝင်တို့ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲPublished May 7, 2011 | By Dr.Tin Bo Bo	ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလ (၂၉)ရက်နေ့ကတော့ အင်္ဂလန် တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ အုတ်အော် သောင်းတင်း ဖြစ်ရတဲ့ မင်္ဂလာ အခမ်းအနားကြီး တစ်ခု ကျင်းပခဲ့တာကို Sky Net ရုပ်သံလိုင်းကနေ Live လွှင့်ပေးတာကို ကြည့်လိုက်ရသဗျာ။ အတော့်ကို ကြီးကျယ် ခမ်းနားတာကလား။ မြန်မာနိုင်ငံက ကြီးကျယ်ခမ်းနား လှပါတယ်ဆိုတဲ့ မင်္ဂလာပွဲကြီးတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်တော့ “ရပ်ကွက်အငြိမ့် နဲ့ အော်ပရာပြဇာတ်” ဆိုတာလို ဖြစ်နေတော့တာကိုး။
Posted in သင်္ချာဗေဒ | Tagged good days for wedding, MaHaBote, Myanmar Astrology, Royal Wedding, royal-wedding-prince-william-kate	# လက်ထပ်မယ်ဆို ၊ ရက်မြတ်ဘယ်လိုPublished October 24, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged burmese horoscope, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာဘုတ်, မြန်မာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူPublished October 17, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in မဟာဘုတ် | Tagged burmese horoscope, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာဘုတ်, မြန်မာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	# အသက်ရှည်ရာ အနာမဲ့ကြောင်း (၁)Published October 5, 2010 | By Thu Tay Thii	.
ယခု ဆောင်းပါးလေးကတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ “ဖိတ်ခေါ်ခြင်း” ဆိုတဲ့ “ကလောင်သစ်တွေ” ပေါ်ထွန်း လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်တဲ့ ဆောင်းပါးလေး အပြီးမှာ ပေါ်ထွက်လာတဲ့ ကလောင်သစ် တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ကလောင်နာမည် “သုတေတီ(မြန်မာ့ဆေးပညာ)” ဖြစ်ပြီး “မြန်မာ့ဆေးပညာနဲ့ ကျန်းမာရေး ဆောင်းပါးများ” ကို ရေးသွားတင်ဆက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခု သူ့ရဲ့ ပထမဆုံးလက်ရာဖြစ်တဲ့ “အသက်ရှည်ရာ ၊ အနာမဲ့ကြောင်း – (၁)” “ဆေးလည်း အစာ၊ ဘေးလည်း အစာ” ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါတယ်။ အားပေး ဖတ်ရှုကြည့်ကြပါစို့။
မှတ်ချက်။ ။ ဆရာသုတေသီ၏ လက်ရေးမူကို “ဗေဒသုခုမ” Web Page ၏ “စတိုင်” နှင့် ကိုက်ညီအောင် (ဆရာ၏ ခွင့်ပြုချက်အရ) အနည်းငယ် ပြင်ဆင်ရေးသား ထားပါသည်။
ဆေးလည်း အစာ ၊ ဘေးလည်း အစာ
ဒီဆောင်းပါးလေးကို သမိုင်းဖြစ်ရပ်ကလေး တစ်ခုနဲ့ စ, လိုက်ချင်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း (၄၀)ကျော် (၅၀) လောက်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ “နေလ၀ိဇ္ဇာ” ဆေးပညာလို့ ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ ဆေးပညာ တစ်ခု လျှမ်းလျှမ်းတောက် ကျော်ကြားအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီပညာကို တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဆရာတစ်ဦးဟာ ရန်ကုန်မြို့ ၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်မှာ “နေလ၀ိဇ္ဇာ” ဆေးခန်းဆိုပြီး မြန်မာ့ဆေးခန်းလေး တစ်ခု ဖွင့်လှစ် ကုသခဲ့တာ ဘယ်လောက်တောင်မှ အောင်မြင်သလဲဆိုရင် “အနောက်တိုင်း ဆေးပညာ” နဲ့ ကုသတဲ့ ဆေးရုံတွေဟာ “ကျီးနဲ့ဖုတ်ဖုတ်” ဖြစ်သွား ရပါတယ်။
နေ့စဉ် ကြိတ်ကြိတ်တိုးနေတဲ့ ရောဂါသည် လူအုပ်ကြီးကို နေလ၀ိဇ္ဇာ ဆရာကြီးဟာ အင်မတန် ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ ဆေးပေးနည်း နဲ့ ကုသခဲ့ရာ လူနာ ထောင်ပေါင်းများစွာဟာ ရောဂါတွေကနေ ပျောက်ကင်းခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီ နေလ၀ိဇ္ဇာ ဆေးပညာအကြောင်း အကျယ် မချဲ့ လိုပေမယ့် နေလ၀ိဇ္ဇာ ဆေးပညာရဲ့ ကျောရိုးကို ပြောပါဆိုရင်တော့ “ဓာတ်စာ” ပါဘဲ။
Posted in မြန်မာ့ ဆေးပညာ | Tagged Healthy Long-life, Myanmar Medicine, အသက်ရှည်ရာ အနာမဲ့ကြောင်း, မြန်မာ့ ဆေးပညာ	# ဖုန်းရွှေ လာပြီPublished September 27, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in ဂမ္ဘီရ | Tagged Feng shui, MaHaBote, Myanmar Astrology, ဂမ္ဘီရ, တရုတ်ရိုးရာ ဗေဒင်, ဖုန်းရွှေ, ဘုတ်ကြီး(၈)ပါး ဗေဒင်, ယိချင်း, အိုးအိမ်ဆောက်လုပ်မှု ပညာ	# ဗေဒင်ပညာ နှင့် အတွေးအမြင်Published September 19, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
ယနေ့အဖို့ ဗေဒင်ပညာအပေါ်တွင် လူအများစု အမြင်လွဲမှားနေမှုကို ရှင်းပြလိုပါသည်။ ဗေဒင်ပညာသည် လူ့ယဉ်ကျေးမှု မပေါ်ပေါက်ခင်ကတည်းက (ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်) ရှိနေခဲ့သည် ပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကိုးကွယ်နေကြသည့် ဘာသာတရားအားလုံးထက် စော၍ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ ယနေ့ ကွန်ပျူတာ သိပ္ပံခေတ်၊ နည်းပညာခေတ်သို့ ရောက်သည့်တိုင်အောင် ဗေဒင်ပညာကို ကမ္ဘာ့လူဦးရေ သန်းပေါင်းများစွာက ယုံကြည်လျှက် ရှိနေသေး ပေသည်။
မိမိသည် ဗေဒင်ပညာကို ယုံကြည်ပါသည်ဟု ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ၀န်ခံသူ ရှိသလို ဗေဒင်ကိုယုံလျှင် ရှက်စရာတစ်ခုဟု ယူဆပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ၀န်မခံသော ယုံကြည်သူများလည်း ရှိပေသည်။ သုတေသန စစ်တမ်းများအရ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ၀န်မခံသော ယုံကြည်သူဦးရေက ပို၍ များပြားသည် ဟု သိရသည်။
ဗေဒင်ပညာကို မယုံကြည်သော သူများကိုပင် လေ့လာကြည့်လျှင် (၂)မျိုး(၂)စား တွေ့ရတတ်သည်။ ပထမ တစ်မျိုးမှာ မွေးဖွားလာသည်မှ သေဆုံးချိန်အထိ လုံးဝ ယုံကြည်မှု မရှိသူများဖြစ်သည်။ ဗေဒင်ပညာနှင့် လားလားမှ မသက်ဆိုင်သူများ ဖြစ်ကြသည်။ မည်သည့် ဘ၀လောကဓံမျိုးကို ရင်ဆိုင်ရသည်ဖြစ်စေ ဗေဒင်ပညာကို အားကိုးမရှာတတ်သော လူမျိုး ဖြစ်သည်။ (အရေအတွက် အလွန်နည်းလွန်းလှသည်)
Posted in ဘ၀ ဒဿန | Tagged MaHaBote, Myanmar Astrology, ဗေဒင်ပညာ နှင့် ခံယူသင့်သော သဘောထား, ဗေဒင်ပညာ နှင့် ဘာသာတရား, ဗေဒင်ပညာဆိုတာ	# ဖိတ်ခေါ်ခြင်းPublished September 13, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေ/ညီအစ်ကို မောင်နှမများ ခင်ဗျား။ ဤ ဆိုဒ်ကလေး စတင်တည်ထောင်သည်မှာ (၂)နှစ် တင်းတင်း ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ ယနေ့ စိတ်ကူးတစ်ခု ရမိသောကြောင့် တင်ပြလိုပါသည်။
စာဖတ်သူ ညီအစ်ကို မောင်နှမများထဲတွင်လည်း စာတို ပေစ ရေးရာ၌ လက်စွမ်း ၊ လက်စ ရှိသူ / စာရေးရန် ၀ါသနာ ပြင်းပြသူများ ရှိပါလိမ့်မည်။ အချို့လည်း ကိုယ်ပိုင် ဆိုဒ်ကလေးတစ်ခု ပြုလုပ်ရန် ဆန္ဒရှိနေသူ များလည်း ပါပါလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့် စာရေးသားရန် ၀ါသနာပါသူများအား ယခု မိမိ၏ “BayDaThuKhuMa (ဗေဒသုခုမ)”စာမျက်နှာ များတွင် ပါဝင်ရေးသားကြပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ မည်သည့် စာပေအမျိုးအစားဟု မသတ်မှတ် လိုသော်လည်း အထူးသဖြင့် -
= ဗေဒင်ပညာရပ် ဆိုင်ရာ = ဂမ္ဘီရ ပညာရပ် ဆိုင်ရာ = ထူးခြားဆန်းကြယ် ဖြစ်ရပ်များ = ကျန်းမာရေး နှင့် မြန်မာ့ဆေးပညာ
= စိတ်နယ်လွန် နှင့် စိတ်စွမ်းအား ဆိုင်ရာ = နာမ်လောက / ပရလောက / သဘာဝလွန် ဖြစ်ရပ်ဆန်းကြယ်ဆိုင်ရာ = ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆိုင်ရာ အတွေးအမြင် နှင့် ဗဟုသုတ စာပေများကို ဦးစားပေးစေလိုပါသည်။ ဆောင်းပါး ပုံစံဖြစ်စေ ၊ ၀တ္တုပုံစံဖြစ်စေ ရေးသားပေးပို့နိုင်ပါသည်။
ဆောင်းပါးများကို ကလောင်အမည်ဖြင့်သာ ရေးသားရန်ဖြစ်ပြီး နာမည်ရင်း၊ နေရပ်လိပ်စာများကို လျှို့ဝှက်ထားနိုင်သည်။
Posted in အမှာ သတင်းစကား | Tagged domain & hosting အခမဲ့, MaHaBote, Myanmar Astrology, ကလောင်သစ်, ကလောင်သစ် များအား ဖိတ်ခေါ်ခြင်း, ဘလော့ဂါ, ဘလော့ဂါ အသစ်များအား ဖိတ်ခေါ်ခြင်း, ဘလော့ဂ်	← Older posts
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (57,208)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,941)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,273)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (31,241)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (23,316)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (14,503)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,531)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,891)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,242)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,254)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,067)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,043)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (9,788)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (9,724)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,288)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,095)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,828)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,457)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,178)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,104)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,815)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,665)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,532)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (7,348)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,243)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,200)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (6,876)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (6,651)# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လ ဟောကိန်းများ (6,462)# စကား (၆) ခွန်း လူ၌ထွန်း (5,999)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !